Thwebula MAGIX Music Maker 24.0.1.34 – Vessoft
Thwebula MAGIX Music Maker
MAGIX Music Maker – a isofthiwe ukudala umculo ngekusitwa wanamuhla umsindo technologies. I sofware iqukethe iqoqo elikhulu imisindo kanye amasampula okuyinto adalwe abaculi professional. MAGIX Music Maker uyakwazi ukuhlanganisa umsindo eqoshiwe izinsimbi ngemabhuloki zomculo ekhona, engeza imiphumela studio amathrekhi wadala futhi uwahlele izidingo zakho siqu. MAGIX Music Maker Lisenza ukuze sandise amathuba ayo zomculo by ukulanda imisindo eyengeziwe kanye namathuluzi.
Isethi amasampula izinhlobo ezahlukene
Ukuguquka ifomethi audio kanye nokuhlela tags
Noise ukususwa kanye ukuzinza umsindo
Download amathuluzi eyengeziwe
Amazwana on MAGIX Music Maker:
MAGIX Music Maker Ahlobene software:
English, Afrikaans, Українська, Français... Guitar Pro 6.1.8.11683
Umhleli Audio Isofthiwe ukuhlela amathegi ngetakhiwo letehlukene audio. Futhi isofthiwe kwenza ukushintsha imininingwane in the amafayela original.